Masiix, dhammaadka sharciga, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Markasta oo aan aqriyo warqadaha Rasuul Bawlos, waxaan arkaa inuu si geesinimo leh u shaaciyey runta waxa Ilaah ku dhammaystiray dhalashada, nolosha, dhimashada, sarakicidda iyo koritaanka Ciise. Waraaqo kale oo badan, Bawlos wuxuu waqti wanaagsan ku qaatay inuu la heshiiyo dadkaas kuwa aan aamini karin Ciise maxaa yeelay rajadooda waxay ahayd mid ku saleysan sharciga. Waxaa muhiim ah in la ogaado in sharciga uu Ilaahay siiyey reer binu Israa'iil uu ahaa mid ku meelgaar ah. Waxa keliya oo loogu talagalay inay ahayd ku-meelgaar oo waa inay sii ahaataa mid dhaqan gal ah ilaa Masiixu yimid.
Israa'iil ahaan, sharcigu wuxuu ahaa macalin baray dembiga iyo cadaaladda iyo baahida loo qabo badbaadiye. Waxay u horseedday ilaa uu Masiixu ballanqaaday yimaado, kaas oo Eebbe ku barakeeyo quruumaha oo dhan. Laakiin sharcigu ma siin karin reer binu Israa'iil caddaalad ama badbaado. Waxay u sheegi kartaa oo keliya inay dambiile u baahan yihiin badbaadiye.
Kaniisadda masiixiga, sharciga, sida Axdigii hore oo dhan, ayaa ina baraya kan Ilaah yahay. Waxay kaloo ina baraysaa sida Eebbe u abuuray dad ay Bixiyuhu u iman doono inuu dembiyadooda dhaafo - oo aan ahayn oo keliya dadka Israa'iil oo ah Israa'iil, laakiin dembiyada dunida oo dhan.
Sharciga marna looguma talagalin inuu noqdo badalka cilaaqaadka lala yeesho Ilaah, laakiin waa dariiqad loogu hogaamiyo Israailiiyiinta Bixiyaha. Galatiya 3,19, Bawlos wuxuu qoray: “Haddaba sharcigu waa maxay? Waxaa loogu daray dembiyada aawadood, ilaa farcankii loo ballanqaaday halkaasuu yaal.
Si kale haddii loo dhigo, Ilaah wuxuu lahaa meel bilow iyo meel ku dhammaadka sharciga ah, halka ugu dambaysaana waxay ahayd dhimashada iyo sarakicista Masiixa iyo Bixiyaha Ciise Masiix.
Bawlos wuxuu sii waday aayadaha 21-26: “Sidee? Haddaba sharcigu miyuu ka gees yahay ballamaha Ilaah? Taasi waa fog tahay! Sababtoo ah kaliya haddii uu jiro sharci nolosha keeni kara, caddaaladdu runtii sharciga ayey ka imaanaysaa. Laakiin Qorniinku wax walba dembiguu ku hoos xidhay in ballanka rumaysadka ee Ciise Masiix la siiyo kuwa rumeeyey. Laakiin intaan rumaysadku iman waxaa laynagu hoos hayay sharciga, innagoo ku hoos jira rumaysad in la muujiyo. Haddabase sharcigu wuxuu edbinta u yahay Masiixa inaynu xaq ku noqonno rumaysadka. Laakiin markii iimaanku yimid kadib, kuma sii hoos jirno edbintii. Maxaa yeelay, kulligiin waxaad wiilashii Ilaah ku tihiin rumaysad Ilaah xagga Ciise Masiix.
Kahor intaan Ilaah indhihiisa u qaadin garashadan, Bawlos ma uusan arkin halka sharcigu ku wajahan yahay - xagga jacaylka, naxariista, iyo dembidhaafka Eebbe naga badbaadin lahaa dembiyada uu sharcigu muujiyey. Taabadalkeed, wuxuu u arkay sharciga inuu isagu dhammaaday, oo wuxuu ku dhammaaday daciifnimo, faaruq iyo diin burbur.
"Oo sidaas waxaa la helay in amarku keenay dhimasho tan iyo nolosha weligeed ah," ayuu ku qoray Rooma 7,10:24, iyo aayaddaaad ayuu su'aasha weydiiyay: "Waxaan ahay nin murugaysan! Yaa iga badbaadin doona jidhkan dhimanaya? Jawaabta uu helay waxay ahayd badbaadadu waxay ku timid oo keliya nimcada Ilaah oo waxaa lagu kasban karaa oo keliya iimaanka xagga Ciise Masiix.
Waxaas oo dhan waxaan ku aragnaa in dariiqa cadaaladda uusan ahayn sharciga, oo aan ka qaadi karin dambigeenna. Jidka keliya ee xaqnimada waa iimaanka xagga Ciise, kaas oo dembiyadeenna oo dhanna laga cafiyo, oo aan ku dhex-galno Ilaahayaga aaminka ah ee annaga si shuruud la'aan ah na jecel oo marna na oggolaan doonin.